वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीृकति लिन थप समस्या, सेवाग्राही मर्कामा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीृकति लिन थप समस्या, सेवाग्राही मर्कामा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि लागु हुनेगरी विभागका हरेक सेवामा अनलाईन सेवा शुरु गर्यो । तर, व्यवस्थाकीय तयारी नहुँदै शुरु गरिएको यो प्रणालीले सेवाग्राही भने थप मारमा परेका छन् ।
अनलाइन सेवा शुरु गर्दा विभागका महानिर्देशक यूवराज खतिवडाले अब लाइन बस्नु नपर्ने बताएका थिए । तर, मंगलबार विभागको ताहाचलस्थित कार्यालयमा भने भर्दगोल अवस्था देखियो ।
अनलाइन प्रणालीमार्फत निवेदन दिएकाहरुले पनि स लिन पनि मंगलबार घण्टौं लाइन बस्नुपर्यो । विभागको कमजोरी कारण कसैको फ्लाइटसमेत छुट्ने अवस्था आएको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।
विभागले अनलाइन निवेदन दिएकाहरुलाई सेवाका लागि समय तोकेको छ । यसरी समय दिएर पनि सेवा नदिँदा सेवागा्रही भने मारमा परेका छन् । एक दिनमा ९ सयदेखि ९५० जनालाईमात्र सेवा दिने गरि विभागले समय तोक्ने गरेको छ । तर, आफैले दिएको समयमा पनि विभाग सेवा दिन असफल भएको हो ।
बिहानै ६ बजेदेखि लाइनमा बसेका सेवाग्राहीहरु दिउँसो २ बजेसम्म पनि लाइनमा नै भेटिएका थिए । दिउँसो ४ बजेको फ्लाइट भएका कतिपय सेवाग्राहीहरु दिउँसो २ बजेसम्म समेत श्रम विभागको गेटबाहिर नै भद्रगोल अबस्थामा थिए ।